Sawirro Filim naxdin leh oo cabsi badan oo adduunka oo dhan laga keenay!
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Sawirro Filim naxdin leh oo cabsi badan oo adduunka oo dhan laga keenay!
by Chris Fischer September 3, 2018
Adduunyada casriga ah ee Photoshop iyo isjiidka jilicsan ee filimada la heli karo, tamartii u geli jirtay abuurista sawir indho qabad leh oo filim naxdin leh ayaa lumay. Ka baxsan daabacadaha aan rasmiga ahayn, runti ma arkeysid farshaxanka boodhadhka gacanta lagu farsameeyay mar dambe.
Waxaa jira boodhadh dhab ah oo astaan ​​u ah halkaas oo laga soo bilaabo xilligii xayeysiinta gacanta lagu rinjiyeeyay, laakiin waxaan jecel nahay in aan baarno shaqada cajiibka ah ee farshaxanada caalamiga ah!
Laga soo bilaabo Beyond (1988)
Amiirka Mugdiga (1987)
Subaxii Dhimashada (1978)
Inbadan oo bogga 2 ah!
farshaxanka dibeddaDiiwaanka Filimkaboorarka filimka
Ku kashifi wejiga sharka shaah cusub 'Nun'
Filimada RLJE waxay sii daynaysaa 'Trench 11'